Meeshaaleen ijaarsaa Obbo Gamshuu Bayyanaa birri Bil. 1.2 baasu balaaf saaxilame - BBC News Afaan Oromoo
Meeshaaleen ijaarsaa Obbo Gamshuu Bayyanaa birri Bil. 1.2 baasu balaaf saaxilame
Madda suuraa, Miidiyaa hawaasummaa
Itoophiyaa keessatti hojiiwwan investimentii gurguddoo kanneen akka ijaarsa daandii fi ijaarsaa biroo hojjechuudhaan kan beekaman Obbo Gamshuu Bayyanaa qabeenyi isaanii birri biliyoona 1.2'tti tilmaamamu balaaf saaxilamu BBC'tti himan.
Godina Shawaa Kaabaa Naannawa Maarhaa Beetee jedhamuun beekamu, magaalaa Alam Katamaa keessatti meeshaalee ijaarsaaleen ijaarsa daandiif oolan gubachuu dubbatan.
Meeshaaleen gubachuu qofa osoo hin taane namoonni hojiif ramadamanillee manca'anii bakka garagaraatti dhokatanii jiru jedhan.
'Wal-dhabdee naannoo Amaaraa caasaa nageenyaa naannichaatu hogganaa ture'
Dargaggoonni naannoo sanaa gurmaa'uun jalqaba dubbii kaasan kan jedhan Obbo Gamshuun boodarra humna nageenyaatii ol ta'uun maashinii ijaarsaa gubuu eegalan jedhan.
Naannawa Marhaa beetee magaalaa Alam Katamaa keessaa pirojektii ijaarsaa daandii lama hojjechiisaa jiraachuu kan dubbatan Obbo Gamshuun meeshaalee ijaarsaa maallaqa birrii biiliyoona 1.2tti tilmaamamurratti balaa qaqqabe jedhan.
Pirojektii Obbo Gamshuu
Biyya kana keessaa pirojektii gurguddaa lama qabaachuu kan himan Obbo Gamshuun naannoo Affaar, Somaalee, Amaaraa fi Tigraay keessatti hojjechaa jiraachuu dubbatan.
''Pirojektii keenya inni tokko Marraabeetee magaalaa Alam Katamaa iddoo Mahaal Meedaa jedhamutti argama. Inni yeroo ammaa dhibbeentaan 98 xumurameera. Pirojektiin daandii inni lammataa ammoo Alam Katamaa- Dogoloo kan jedhamu reef jalqabama.
Pirojektii guddaan kun amma harka 20rra jira. Nuti hojiima keenya utuu hojjennu kaleessa walumatti gurmaa'anii konkolaataa fi qabeenya hunda gubuutti ka'an.''
Namoonni gurmaa'anii dhufanii maashina keessan guban eenyu jennee gaaffii gaafanneef,''Ani akkan iyyaafadhetti dargaggeessuma naannoo namootuma biyya sanaatu walguuree dhufee meeshaa gubuu eegale.
Humnoota nageenyaa qolachuuf baay'ee yaalanii turan. Garuu humna isaaniitii ol ta'an. Warruma naannawa sanaatu guban, kan biraan eenyutu achi jira?'' jedhan.
Qabeenya hagamiitu bade?
Walii galatti pirojektoota lameen irra meeshaalee ijaarsaa gurgudoo hedduutu jiru kan jedhan Obbo Gamshuun ''kan gubatee fi kan irraa hafe adda baasnee beekuu baannus harki caalu akka gubate beekna'' jedhan.
''Pirojektii kanarra yoo xiqqaate namoota 1500 ta'antu hojjechaa jiru. Irra caalaan namootuma naannooti. Ogeeyyiin(injineroonni) 400 ol ta'an ammoo magaalaa Finfinneerraa deemanii hojjechaa jiru. Kanaaf kanumasaanii guban. Maaliif akka gubuun barbaachise naaf hin galu. Wallaalummaasaanii yoo ta'e pirojektichi isaan fayyada''
Daandiin gara Tigraay geessu cufameeraa?
Hanga ammaatti lubbuu namaarra miidhaan ga'e hin jiru kan jedhan Obbo Gamshuun garuu hojjettooni faffaca'anii bakka garaagaraa dhokatanii jiru jedhan.
''Haala jiru tasagabbeessuuf humna mootummaa naannoo fi federaalaa waliin hojjechaa jiru. Namoota bakka bakkatti dhokatanii jiranis nageenyummaasanii mirkaneessuuf hojjechaa jiru. Warra baqatanis walitti qabaa jiru.Hanga ammaatti meeshaan gubachuun alatti namni du'e hin jiru'' jedhan.
Pirojektoonni daandii asfaaltii kunneen tokko kiilomeetira 85, kaanimmoo kiilomeetira 47 yoo ta'an walumaa galatti maallaaqa birrii biiliyoona 2.2 oliin socho'aa jiru.
''Ijaarsa pirojektii daandii kanaaf maashinoota gurguddoo hedduutu ramadamanii jiru. Doozara 140-150tu jiru. Badiin qaqqabe maallaqaan meeqa ta'a kan jedhuuf qorannoo barbaadullee qabeenya birrii biiliyoona 1.2tti tilmaamamutu balaa kanaaf saaxilame. Kan gubatee fi kan hafe hanga yoonaa adda hin baasne''
Naannoo Amaaraa, Qobbootti hedduun hidhamaa jiraachuu dhagahame
Haala rakkisaa yaaddoo nageenya qabu kan namuu walitti gurmaa'ee meeshaale ijaarsaa irraan miidhaa geessisan kana keessatti akkamiin hojii keessan itti fufuuf karoorfattan kan jedhuuf Obbo Gamshuun akkas jedhan:''Kontiraata waan qabnuuf kana bulchiinsa keenya waliin mari'anna. Haasofnee murteessina. Ammaaf kana jennee waan dubbannu hin qabnu. Mootummaa waliinis mari'annee waan murteessinu ta'a'' jedhan.
''Badii qaqqabe kana hambisuuf qaamni mootummaa hedduu na gargaaranii turan. Ammallee qaamni mootummaa baay'ee ifaajaa jiru. Qaama mootummaa nan galateeffadha. Badiin kan duraa ga'ee darbeera, gara fuulduraatti akka itti hin fufneef qaamni mootummaa irratti hojjechaa jira'' jedhan Obbo Gamshuun.
Badiin raawwatame kun eenyuun akka ta'ee fi seeraan to'atameeraa kan jedhuu adda baafachuuf qondaaltota Aanaa Marhaa Beetee biratti bilbilleerra.
Hoogganaan Waajjira Kominikeeshinii Aanaa Marhaa Beetee Obbo Balaay Laaqee dhimmicharratti odeeffannoo walitti qabachaa jiraachuu himanii odeeffannoo dabalataa argachuuf sa'aatii booda akka bilbilluuf nutti himan.
Aanaa Baabbilee: Manniifi beeladni takka hin jirtu, nurraa gubaniiru
5 Adooleessa 2018
'Rakkoo naannoo Amaaraa duuba ABO'n jiraachuu ragaa qabna' - aanga'aa Amaaraa
12 Ebla 2019
13 Hagayya 2019
8 Caamsaa 2021
Caccabaan rookkeetii Chaayinaa to'annoon ala bahee ture ‘garba Indiyaaniirratti kukkufe’
Diishitaa Giinaa- Muziqaa saba Arrii torbanootatti daawwattoota mil. sadi argate
Awwaalchi daa'imaa waggaa 78,000 lakkoofsise Afrikaatti argame isa jalqabaati jedhame
Filannoon baranaa 'gaaffii uummataa karaarraa gara paarlaamaa kan galchudha' - Abiy Ahimad
Walitti bu'iinsa Masjiida Jarusaalemitti ka'een hedduun miidhaman